Sayenzi Linux 7.9 inosvika neOpenAFS, yum-cron uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yekuparadzirwa kweLinux "Sayenzi Linux 7.9" yakatoburitswa kare uye inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana yeiyo iyo kuiswa kwemamwe mapakeji nyowani izvo zvinouya kuzovandudza zvimwe zvinhu muhurongwa. Iyi itsva vhezheni yeSainzi Linux 7.9 yakavakirwa pahwaro hweRed Hat Enterprise Linux 7.9 package uye inowaniswa nematurusi akagadzirirwa kushandiswa mumasangano esainzi.
Misiyano mikuru neRHEL inouya kuzodzokazve nekuchenesa zvinongedzo kuRed Hat services. Chairo sainzi mashandisirwo, pamwe nemamwe madhiraivha, anopihwa ekuisirwa kubva kune ekunze marekodhi akadai EPEL uye elrepo.org. Usati wasimudzira kuSainzi Linux 7.9, zvinokurudzirwa kuti umhanye 'yum kuchenesa zvese' kubvisa cache.
1 Sayenzi Linux 7.9 Kiyi Nyowani Zvimiro
2 Dhawunirodha Sayenzi Linux 7.9
Sayenzi Linux 7.9 Kiyi Nyowani Zvimiro
Mune iyi vhezheni nyowani yekugovera tinogona kuwana izvo pasuru ine OpenAFS yakawedzerwa, open source yakaparadzirwa FS Andrew faira system, pamwe ne iyo SL_gdm_no_user_list package, , que inoremadza kuratidzwa kwerondedzero yemushandisi muGDM pazvinenge zvakakodzera kutevedzera mutemo wakasimba wekuchengetedza uye iyo SL_enable_serialconsole package yekumisa serial console.
Uyewo, shanduko dzakaitwa pamapakeji, kunyanya ine chekuita nekushandurwa kwechiratidzo.
Iyo system yum-cron inoshandiswa kuisa zvigadziriso otomatiki, pachinzvimbo cheyum-autoupdate. Nokusingaperi, zvigadziriso zvinoshandiswa otomatiki uyezve chiziviso chinotumirwa kumushandisi. Kuti uchinje hunhu mune otomatiki yekumisikidza danho, mapakeji SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (inorambidza otomatiki kumisikidza yekuvandudzwa) uye SL_yum-cron_no_default_excludes (inobvumidza kumisikidzwa kweyakagadziriswa neiyo kernel) yakagadzirirwa.
Mafaira ane kumisikidzwa kubva kunze kwekuchengetedza (EPEL, ELRepo, SL-Zvimwe, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) takaendeswa kunzvimbo yepakati, sezvo izvi zvinyorwa zvisina kujeka zvekuburitswa uye zvinogona kushandiswa neshanduro ipi neipi yeSainzi Linux 7. Kuti utore dhata nezvezvakachengetedzwa, mushandisi anofanira kumhanya: "yum gadza yum-conf-repos" uye wozogadzira dura rimwechete, re semuenzaniso, "yum gadza yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf -elrepo".
Kuenzaniswa nebazi reSainzi Linux 6.x, iwo mapakeji alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (inowanikwa muEPEL7 repository) vanobviswa pane hwaro hwekuumbwa uye akawedzera SL_no_colorls package yekudzima kuburitsa kweruvara mu ls.
Izvo zvinhu (shim, grub2, Linux kernel) zvinoshandiswa pakubhura muEFI Yakachengeteka Boot modhi zvakasainwa neSainzi Linux kiyi, iyo, kana yagoneswa, inoda mashandiro mashandiro sekiyi inofanirwa kuwedzerwa kune firmware.
Chekupedzisira, zvinonzi Scientific Linux 7 yatora kushandiswa kwakasimba kweiyum misiyano kubatsira kurerutsa maitiro evatongi vega.
Iye zvino chero magadzirirwo emafaira ekuchengetedza, senge kushandisa magirazi emuno, anochengetwa zviri nyore pakati peshanduro sezvo mafaera ekuchengetedza anopihwa neSL haatarisirwe kuchinja.
Nekudaro, izvi zvinopa maitiro asingatarisirwe panguva yedu yeKuburitsa Mukwikwidzi maitiro. Kana iyo 7x kumisikidzwa ikabvumidzwa, inozonongedzera kune iyo 7x repository pachinzvimbo cheKasunungurwa Yemubati repositi. Panguva iyoyo, iyo 7x repository ichave iine software yakura kupfuura iyo Regedza Mukwikwidzi.
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yekuparadzira, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Sayenzi Linux 7.9
Kana iwe uchida kurodha pasi mufananidzo kubva kune ino system kukwanisa kuisa pakombuta yako kana kugona kuyedza pasi pemuchina chaiwo, Iwe unofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yekugovera uye muchikamu chayo chekuburitsa iwe unowana iyo system mufananidzo.
Muchikamu ichocho chekurodha unogona kudhawunirodha chifananidzo nenzvimbo yedesktop kana mumwe mufananidzo iyo yekuvaka iyo system kune zvaunoda.
Mufananidzo wekuparadzira unopihwa iyo x86_64 dhizaini, muchimiro cheDVD mapakeji (9.9 GB uye 7 GB), pamwe nemufananidzo wakapfupiswa wekumisikidza network ye620 MB (iyo miviri yekupedzisira mifananidzo idiki maererano neiyo yapfuura vhezheni).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Sayenzi Linux 7.9 inosvika neOpenAFS, yum-cron uye nezvimwe
Fedora 34 inogadzirira vhezheni aarch64 nePlasma yatinogona kushandisa mumaplate akareruka